उफ्, नेपाली !- विचार - कान्तिपुर समाचार
उफ्, नेपाली !
असार ५, २०७४ हरिहर तिमिल्सिना
‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार अनिवार्य नेपाली विषयको नतिजा सबैभन्दा खस्किएको पाइएको छ ।’
असार ३ गतेको कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठको समाचारको एक वाक्य हो यो । मुलुकमा यति धेरै विद्यालय–विश्वविद्यालय छन् ।
भाषाको खेती गर्ने पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र सिङ्गो शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान छ । साझा प्रकाशन छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ । सरकारी लगानी छ । नेपाली भाषाका प्रयोक्ता पनि बढिरहेका छन् । तर पनि नेपाली भाषाको यस्तो कन्तबिजोक किन ? लगभग साढे चार लाख परीक्षार्थीमध्ये १ सय ८१ जना मात्रै ए प्लस अनि ६५ हजार परीक्षार्थी नेपाली विषयकै कारणले माथिल्लो कक्षामा जान अयोग्य किन ? सबैले गाह्रो भन्ने र मान्ने गरेको गणित र विज्ञानलगायत विषयमा उच्च अङ्क (ए प्लस) सहितको उत्तीर्ण सङ्ख्या बढ्नु र सजिलो भनिएको/मानिएको नेपाली विषयको नतिजा खस्किनुका पछाडि कुन तत्त्वको भूमिका छ ? पङ्क्तिकारलाई लागेका केही कुरा यस्ता छन् :
गुरुहरू ज्ञानका धनी छन् तर दानका गरिब । विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा उदार अङ्क दिनुलाई तिनीहरू आफ्नै पुख्र्यौली सम्पत्ति दान दिनुसरह सम्झन्छन् । आफूले सिकाएको भन्दा अलग वा आफूलाई लागेको भन्दा भिन्न तरिकाले उत्तर लेख्नेलाई नम्बर नदिएर दण्डित गर्छन् । भाषामा धेरै नम्बर दिनु हुन्न टाइपका पूर्वपनपख्खे (प्रि–बायसनेस) बोकेर तिनीहरू कापी जाँच्न बस्छन् । केही वर्ष पहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कार्यशालामा आफूलाई वरिष्ठ ठान्ने एकजना गुरु एउटा विद्यार्थीको कापीमा ८३ अङ्क हाल्ने नयाँ परीक्षकलाई सम्झाउँदै थिए, ‘नेपालीमा कसरी यतिका धेरै नम्बर आउँछ ?
भाषा खेलाँचीको विषय होइन, भाषामा ह्वात्त ह्वात्त नम्बर दिन मिल्दैन । हामीले अहिलेसम्म ८० नम्बर दिएका छैनौं । त्यसैले तपाईं पनि घटाउनुहोस् ।’ विद्यार्थीले ८० नम्बर ल्याउँदा तनाव महसुस गर्ने गुरुहरूको भीडमा अब त ९० को कुरा छ । धन्न यसपालि १८१ जनाले नब्बे कटाएछन् । मलाई त यसैमा अचम्म लागेको छ ।
भाषाका चार प्रमुख आयाम हुन्छन्, सीप हुन्छन् । सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ । हाम्रो परीक्षा प्रणालीले अहिलेसम्म लेखाइका आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्छ । अङ्ग्रेजीमा पहिलेदेखि नै ७५ अङ्कको लेखाइ र २५ अङ्कको सुनाइ, बोलाइ परीक्षा हुँदै आएको छ । सात समुद्रपारिको भाषा भए पनि यसमा अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयको त्रिकोणात्मक लगाव हुन्छ । बरु नेपाली पो पराइको भाषाजस्तो हुँदै गएको छ । जाने पनि ठीक, नजाने पनि ठीक । हुन त नेपालीमा पनि ७४ सालको परीक्षादेखि लागू हुने गरी सुनाइ र बोलाइलाई २५ अङ्क छुट्याइनेछ । यस्तो अङ्कलाई मास्टरले गोजीबाट दिने नम्बर पनि भन्ने गरिन्छ ।
यसले नेपाली भाषाको हकमा विद्यार्थीमा कति गुणस्तर सुधार्ने हो, हेर्न भने बाँकी छ । अर्को कुरा अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयको जोडबल विज्ञान र गणित विषयमा हुन्छ । विद्यार्थीलाई गणित र विज्ञानमा राम्रो गर्नैपर्ने त्यहीअनुसारको मनोवैज्ञानिक दबाब हुन्छ । यस्ता विषयले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्न मद्दत गर्छन् । प्राविधिक विषय पढ्न यी विषयमा दख्खल हुनैपर्छ । तर भाषा राम्रो भयो भने डाक्टर, इन्जिनियरलगायत जुनसुकै पेसालाई पनि काम लाग्छ भनेर सिकाउन हाम्रो शिक्षा प्रणाली चुकेको छ । परिणामस्वरूप नेपाली हेलत्वको विषय भएको छ । लाजमर्दो कुरा छ, नेपाली राम्ररी बोल्न नजान्नु, लेख्न नजान्नु र टाइप गर्न नजान्नुलाई अयोग्यता होइन, योग्यता मानिन्छ । अर्को विषयमा पोख्त हुनाले नेपाली नजानेको अर्थ लगाइन्छ । यस्तो सामाजिक मनोविज्ञानबीच च्यापिएको नेपाली भाषा कसरी राम्रो बन्न सक्छ ?
बिरालो माने क्याट
देवकोटाले अङ्ग्रेजीको बढ्दो प्रभावलाई इंगित गर्दै उतिबेलै ‘हाई हाई अङ्ग्रेजी’ लेखेका थिए । अब त ‘हाई हाई अङ्ग्रेजी’को पारो चढ्दै गएर ‘हाई डोज अङ्ग्रेजी’ बन्न पुगेको छ । नेपाली बोल्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने स्कुल समाजमा छ्यापछ्याप्ती छन् । अङ्ग्रेजी भाषाको विकासका लागि बजारमा अनगिन्ती पठनपाठन सामग्री (टिचिङ–लर्निङ मटेरियल) पाइन्छन् । यसका तुलनामा नेपाली सामग्री बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ । परीक्षाको नतिजा लिन आउँदा ‘तपाईंको विद्यार्थी उत्तीर्ण भयो’ भन्दा पढ्या भए पो पास होस् त, झन् यसपाला राम्ररी पास होला भनेर सोचेको उत्तीर्ण पो भएछ भनेर दु:खमनाउ गर्ने अभिभावक अझै पनि धेरै भेटिन्छन् ।
अचेलका विद्यार्थी गृहकार्य गर्दैनन्, होमओर्क गर्छन् । गीत गाउँदैनन्, राइम्स गाउँछन् । खाना खाँदैनन् लन्च, डिनर गर्छन् । फेसबुकमा नेपाली लेख्न गाह्रो छ । नेपाली कमेन्ट र स्ट्याटस रोमनमा आउँछन् । च्याट गर्न पनि रोमनमै सजिलो । ह्रस्व–दीर्घ नचाहिने । अहिले ‘चौहत्तर साल हो’ भन्दा विद्यार्थी बुझ्दैनन् । चौहत्तर भनेको ‘सेभेन्टी फोर’ हो भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । पहिला विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी पढाउँदा नेपालीमा उल्था गरेर बुझाउनुपथ्र्यो । अहिले गुरुहरूले नेपाली पढाउँदा अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर बुझाउनुपर्छ । अब अङ्ग्रेजी नजान्ने नेपाली गुरुले नेपाली पढाउन नसक्ने दिन आउँदै छ । यो दशा टाढा छैन । पहिला क्याट माने बिरालो हुन्थ्यो, अब बिरालो माने क्याट भएको छ ।
हाम्रो जस्तो अविकसित र तेस्रो विश्वको मुलुकमा ज्ञान र क्षमताको मापक नै अङ्ग्रेजी भाषा बन्ने गर्छ । जसले राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्न सक्यो, उही विद्वान् कहलिने र राम्रो अवसर पाउने अवस्था छ । प्रस्तावना र प्रतिवेदन लेख्न, विदेशीसित संवाद गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण ठोक्न, गाउँमा परियोजना ल्याउन, परराष्ट्र सेवामा जागिर पड्काई राजदूत बन्न अङ्ग्रेजी नै राम्रो चाहिन्छ । यस्ता अनेक कारण हुन सक्छन् जसले विद्यालय र अभिभावकलाई विद्यार्थीको नेपाली बिग्रिए पनि चिन्ता हुन्न । अङ्ग्रेजीचाहिं जसरी पनि राम्रो चाहियो । अङ्ग्रेजी राम्रो पार्नुको अर्थ नेपाली नराम्रो पार्नु पनि त होइन नि ! यसतर्फ धेरैको ध्यान गएको पाइन्न ।
भाषाको घनीभूत अध्ययन, अनुसन्धान, विमर्श, विस्तार र आविष्कार गर्नुपर्ने आदर्श व्यक्ति र संस्थाहरू ‘फूल’ ह्रस्व लेख्ने कि दीर्घ भन्ने निहुँमा युद्धै छेडुँलाझैं गर्छन् । कलिला विद्यार्थीको दिमागमा भ्रमको भूत उमार्छन् । अघिल्लो वर्ष ठीक भएको हिज्जे पछिल्लो वर्ष ठीक नहुने, फेरि अर्को वर्ष ठीक हुने । शब्दकोशबाट वर्णहरू रातारात गायब हुने, प्रत्येक वर्षका पाठ्यपुस्तकमा फरकफरक भाषिक नियम आउने । नेपाली भाषा गाह्रो होइन तर गाह्रो भनेर भ्रम छर्ने । यस्तै काम गरिए । जति लेखे पनि नम्बर आउँदैन भन्ने छाप विद्यार्थीको दिमागमा पारियो । आखिर जुनसुकै क्षेत्रको भ्रम होस्, त्यो भूतभन्दा डरलाग्दो हुन्छ नै ।
शिक्षक कर्मकाण्डी, शिक्षण पद्धति परम्परागत, पाठ्यपुस्तक परम्परागत अनि अक्षराङ्कन पद्धतिचाहिं आधुनिक ! कताकता तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको अतिक्रमण अनि आमसञ्चारको प्रभाव । नेपाली भाषाको अध्ययनछिको निकास के ? अवसर कति ? यस्ता कुराले पनि केही प्रभाव पार्छ नै विद्यार्थीलाई । तर आफ्नो देशको मूल भाषा अवसर हेरेर मात्रै पढिने/ पढाइने कुरा होइन । जसरी आमाले आफ्नो बच्चा हुर्काउँदा फाइदा/बेफाइदा हेर्दिनन्, त्यसरी नै आफ्नो भाषाको प्रयोगमा फाइदा/बेफाइदा हेरिनु हुन्न । के भाषा नाफाघाटाको विषय मात्रै हो र ?
तिमिल्सिना साँगास्थित नेपाल प्रहरी स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल हुन् ।
प्रकाशित : असार ५, २०७४ ०७:५८
महिला आन्दोलनका उपलब्धि
असार ५, २०७४ पवित्रा बेलवासे
सदियौंदेखि वञ्चितीकरण, वहिष्करण र विभेदीकरणको सिकार बन्दै आएका महिलाको उत्थान र विकास तथा उनीहरूमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी हरेक क्षेत्रमा समतामूलक प्रतिनिधित्व गराउने हेतुले विभिन्न कालखण्डमा महिला आन्दोलन हुँदै आएका छन् ।
अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषणजस्ता अति नै निन्दनीय विषयले महिलाको विकासमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको पाइन्छ । पुरुषको अहंकारवादले ग्रसित समाजमा महिलालाई माथि उठ्न नदिनु, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मूलधारमा महिलाको सहभागिता शून्य हुनु, विविध किसिमका अवसरबाट महिलालाई वञ्चित गरिनुजस्ता यावत् कारणले महिलाको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको विषम परिस्थितिका बेला सन् १९०८ देखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा महिला मजदुरहरूको आन्दोलन सशक्त ढंगबाट अगाडि बढेको थियो ।
फलस्वरूप सन् १९०९, मार्च ८ मा उक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगी आन्दोलनरत महिलाका केही माग पूरा भए । महिला आन्दोलन सशक्त बन्दै जाँदा महिलाप्रतिको सोचाइमा केही परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ । सन् १९११ देखि ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएसँगै महिलाका हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अधिकांश देश सकारात्मक देखिएका छन् ।
महिला आन्दोलन महिलाका पक्षमा उल्लेखनीय परिणाम हासिल गर्न सफल भएको छ । महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९५२ ले महिलालाई कुनै पनि भेदभावबिना पुरुषसरह सबै प्रकारका निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, सम्पूर्ण निकायका निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने र राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक पद धारण गर्न तथा सबै किसिमका सार्वजनिक काम गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो ।
यस प्रकार महिलाविरुद्ध भए गरेका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभेद अन्त्य गर्दै समतामूलक वातावरण सिर्जना गर्न सकारात्मक पहलकदमी भएको पाइन्छ । महिला उत्थान तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसघंले पनि उल्लेखनीय मात्रामा नीतिनियम तर्जुमा गरेको छ । सन् १९७९ मा पारित र सन् १९८१ मा अनुमोदित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले समानताको सिद्धान्तका आधारमा पुरुषसरह महिलालाई सबै निर्वाचन र सार्वजनिक जनमत संग्रहमा मतदान गर्न पाउने अधिकार, सबै प्रकारका निर्वाचनका लागि योग्य हुने अधिकार, सरकारी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागी हुने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने, सरकारका सबै तहमा हुने सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार, नागरिकता पाउने र नागरिकता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरी महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।
महिलालाई दोस्रो दर्जामा हेरिने परिपाटी अन्त्य गरी समानताको दायरामा ल्याउन राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय व्यवहारबाट नहेरिनु, सम्पूर्ण हकअधिकारबाट वञ्चित गरिनु, घरको सीमित दायरामा राखिनु खासगरी महिलाको विकासमा बाधक बनेका विषय हुन् । त्यसैले पनि उन्नति र समृद्धिका लागि महिला आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्दै जान आवश्यक छ ।
महिलाका यावत् समस्यामाथि छलफल तथा समस्याका मूलभूत विषय पत्ता लगाउँदै समाधानको बाटो पहिल्याउने उद्देश्यका साथ सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो महिला विश्व सम्मेलन आयोजना भयो जसले महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, समानताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने तथा महिलामाथि हुँदै आएका अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण अन्त्यका लागि सम्पूर्ण महिला वर्ग एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसैगरी सन् १९९३ मा भियनामा आयोजित विश्व मानव अधिकार शिखर सम्मेलनले पनि महिलाका समस्या र अवसरबारे गहन छलफल गरेको थियो । त्यस सम्मेलनले महिला अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको थियो ।
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । मताधिकारबाट वञ्चित गरिनु आफैंमा निन्दनीय कार्य भएकाले यो अधिकार प्राप्तिका खातिर भएको आन्दोलनबाट केही हदसम्म सफलता प्राप्त भयो । महिला र पुरुषलाई समानताका आँखाले हेरिनुपर्ने र कुनै पनि हकअधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्न नपाइने भनी संघर्षरत महिलाले प्राप्त सफलतालाई महत्त्वका साथ हेरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा महिला आन्दोलनको प्रसंगमा योगमाया न्यौपानेको नाम आउँछ । १९२४ सालमा भोजपुरको कुलुङ भजुवाबेसीमा जन्मिएकी योगमायाले तत्कालीन राणा शासनविरुद्ध साहसिक कदम चालेकी थिइन् । बाल्यावस्थामा विधुवा भएकी उनले त्यसबेलाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिँदै सामाजिक विद्रोह गरी पुन: विवाह गरेकी थिइन् । उनले ‘सत्याग्रह भिक्षा’ का नाममा १९९३ मा काठमाडौं आई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरलाई भेटी अनुरोधपत्र बुझाएकी थिइन् । उक्त माग सुनुवाइ नहुने भएपछि १९९८ असारमा ६८ जनासहित अरूण नदीमा हाम फालेर मृत्युवरण गरेकी थिइन् । योगमाया र उनका अनुयायीले तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थाविरुद्ध विद्रोहस्वरूप मृत्युवरणगरेको घटनाले महिला आन्दोलनको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण र उच्च स्थान राख्छ ।
यसरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उल्मूलन गर्न आन्दोलनमा होमिने महिला र उनीहरूको योगदानलाई आत्मसात् गर्दै समाज परिवर्तनका साथै महिलाप्रतिको संकुचित सोचाइ अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा महिलाको सार्थक उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा गराउनुपर्छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो ।
महिलाको उत्थान तथा विकास गर्दै सामाजिक कुरीतिलाई चिरफार गर्ने आन्दोलनमा मंगलादेवी सिंह, कामाक्षादेवी, साधना प्रधान, द्वारिकादेवी ठकुरानी, साहना प्रधान, शैलजा आचार्यजस्ता हस्तीले दिएको योगदान र समर्पणले आजको दिनमा महिलाप्रति गरिने व्यवहार र राखिने सोचाइमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको छ । नेपालमा महिला असमानता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनजस्ता निन्दनीय कार्यलाई रोक्न सन् १९७५ देखि मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । १९७७ असार २५ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले सती प्रथा अन्त्य गरेको कदमलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायत र निरकुंश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका महिलाको योगदानलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
आधा आकाश ढाकेका महिलालाई अमानवीय व्यवहार गर्दै दोस्रो दर्जाका रूपमा राख्ने पितृसत्तात्मक सोच र त्यो सोचले ग्रसित समाजको कुसंस्कारलाई चिर्न विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आएका आन्दोलनले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरे पनि पर्याप्त छैन । राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति सोचेअनुरूप छैन, मधेसमा अहिले पनि दाइजोको निहुँमा महिलालाई क्रुर यातना दिई जिउँदै जलाइन्छ, बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ । पश्चिममा छाउपडी प्रथा कायमै छ । घरेलु हिंसाको सिकार बन्दै आएका महिलाको अवस्था पनि कम छैन, बलात्कारजस्तो जघन्य आपराधिक घटनाको अन्त्य हुन सकेको छैन । महिला अधिकारसम्बन्धी बनेका नीतिनियम सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा महिला आन्दोलनको निरन्तरता अपरिहार्य छ ।